စာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့်ကတ်ပြား အိမ်တွင်မေ့ကျန်ခဲ့သော ကျောင်းသူအား ယာဉ်ထိန်းရဲတပ်ဖွဲ့မှ ကူညီ?? - Yangon Media Group
စာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့်ကတ်ပြား အိမ်တွင်မေ့ကျန်ခဲ့သော ကျောင်းသူအား ယာဉ်ထိန်းရဲတပ်ဖွဲ့မှ ကူညီ??
ဘားအံ၊ မတ် ၇ – တက္ကသိုလ် ဝင်တန်းစာမေးပွဲ ဒုတိယနေ့ဖြစ်သည့် မတ် ၇ ရက်တွင် စာမေးပွဲဖြေဆိုမည့် ကရင်ပြည်နယ် ဘားအံမြို့ အမှတ် (၇) ရပ်ကွက်မှ ကျောင်းသူ တစ်ဦးနေအိမ်တွင် စာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့်ကတ်ပြား မေ့ကျန်ခဲ့သည့်အတွက် စာမေးပွဲအချိန်မီဖြေဆိုခွင့် ရရှိအောင် ယာဉ်ထိန်းရဲတပ်ဖွဲ့မှ ကူညီပေးခဲ့ကြောင်း ကရင်ပြည်နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးမှ သိရသည်။
ဘားအံမြို့အမှတ် (၇) ရပ်ကွက် ဒေါက်တာစောလှထွန်းလမ်း နေ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းကျောင်းသူ တစ်ဦးသည် မတ် ၇ရက် နံနက် ၈နာရီခွဲခန့်က အင်္ဂလိပ်စာဘာသာ ရပ်အား ဖြေဆိုရန် ဘားအံမြို့ အ မှတ်(၂) အခြေခံပညာအထက် တန်းကျောင်း စာစစ်ဌာနသို့ရောက် ရှိလာစဉ် စာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့် ကတ်ပြား အိမ်တွင်မေ့ကျန်ခဲ့သဖြင့် တာ ဝန်ကျယာဉ်ထိန်းရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးအား အကြောင်းကြားခဲ့ရာ ယာဉ်ထိန်းရဲတပ်ဖွဲ့မှ ရဲတပ်ကြပ် ကြီးသန့်ဇင်စိုးက အဆိုပါကျောင်း သူအား ဆိုင်ကယ်ဖြင့် ခေါ်ဆောင် ကာ အဆိုပါကျောင်းသူနေအိမ် သို့သွားရောက်ယူဆောင်နိုင်ရန် ကူညီပေးခဲ့ပြီး ကျောင်းသို့ နံနက် ၉ နာရီတွင် ပြန်လည်ရောက်ရှိ လာခဲ့သည့်အတွက် စာမေးပွဲကို အချိန်မီ ဖြေဆိုနိုင်ခဲ့သည်။
ကရင်ပြည်နယ်အတွင်း မြို့ နယ်များရှိ စာစစ်ဌာန ၄၆ ခုတွင် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း ကျောင်းသား ကျောင်းသူ ၁၉ဝဝဝ ကျော် စာမေး ပွဲဝင်ရောက်ဖြေဆိုလျက်ရှိသည်။
အလားတူ မတ် ၇ရက် နံနက် ပိုင်းကလည်း မွန်ပြည်နယ် သထုံ မြို့ အထက(၁)စာစစ်ဌာနတွင် တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲဖြေဆိုမည့် ကျောင်းသူတစ်ဦး စာမေးပွဲဖြေဆို ခွင့်ကတ်ပြား အိမ်တွင်မေ့ကျန်ခဲ့ သဖြင့် သထုံမြို့မရဲစခန်းမှ တာဝန် ရှိသူတစ်ဦးက ယင်းကျောင်းသူ အား ဆိုင်ကယ်ဖြင့် အိမ်သို့အချိန် မီပြန်လိုက်ပို့၍ စာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့် ကတ်ပြားအား ကူညီယူဆောင်ပေး ခဲ့ရကြောင်း သိရသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံမှ သရက်သီးများ မြဝတီမြို့သို့ဝင်ရောက်လာပြီး ပြည်တွင်းဈေးကွက်သို့ စတင်ဖြန်??
မူဆယ် ၁ဝ၅ မိုင် နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေး ဇုန်၊ သစ်သီးဝလံ ကုန်စည်ဒိုင်၏ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးစိုင်းမောင်ညွန့်နှ?
စစ်ကိုင်းကောင်းမှုတော် စေတီတော်ကြီး အဖြူရောင်ဆေးသင်္ကန်း ကပ်လှူအောင်ပွဲ အထိမ်းအမှတ် ဖိတ်ခေါ်?
ဟက်ဒါဖီးလ်နှင့် ပွဲတွင် ဖယ်လိုင်နီနှင့် ပေါ့ဘာ ပါဝင်ရန် မသေချာ
အော်တိုတယ်လီဖုန်း ချွတ်ယွင်းမှုများကို 106 Call Center သို့ ၂၄ နာရီ တိုင်ကြားနိုင်